Ingabe Uthumela Umbhalo useGumbini Lokugeza? | Martech Zone
Ingabe Uthumela Umbhalo useGumbini Lokugeza?
NgoLwesine, ngo-Okthoba 20, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 U-Adam Encane
Amathuba amahle kakhulu wokuthi uthumela umbhalo usendlini yokugezela… empeleni abantu ababili kwabathathu bayavuma ukukwenza. Kungiphatha kabi ukucabanga ngokuboleka ifoni ephathekayo yanoma ubani manje! Siyakwazisa lapho amaklayenti ethu esebenzisa izinsizakalo zethu zokuthumela imiyalezo… kodwa sibonga okuhle ukuthi ngokuvamile bangaphandle kwe- ikhaya liyathengiswa! Ngokuqondene no-2 / 3rds wenu… Ngiyethemba nonke ninazo izikrini zokuthinta kanti enye ingxenye yesithathu inamakhibhodi.
Ngokuqondene nalabo abathumela imiyalezo enkundleni yemidlalo… yebo, siyakubona. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kungani izinkundla zemidlalo yeshashalazi zingafakanga izivimbamakhalekhukhwini. Ngingakhokha imali eyengeziwe nge-movie uma kungadingeki ngizwe iringithoni yothile kaJustin Bieber! Ngibonga abantu bakwaTatango ngokuhleka kwabo ... ngizogeza izandla zami manje.
Ikusasa Lizofaka iMicrosoft
I-Oct 20, i-2011 ku-5: i-29 PM
I-Oct 20, i-2011 ku-5: i-57 PM
Siyabonga ngokuthumela i-infographic yethu!
I-Oct 24, i-2011 ku-2: i-33 PM
kuhle, ngiku-1/3 okungakwenzi ngenkathi kwenziwa unombolo 2. sikhethekile njengaleyo haha